Antso vonjy :: Mila fanampiana ity zaza miaina amin’ny ôksizena, efa ho valo volana • AoRaha
Hatramin’ny nahaterahany, valo volana lasa izay, no tsy nisy andro miratra ny an’i Mandresimanana Diary
Nankasitrahana Fabien, zazalahy kely. Any amin’ny hôpitaly no trano ipetrahan’izy sy ny reniny. Manana olana ao amin’ny taovam-pisefoana izy ka miaina amin’ny ôksizenina. Miantso vonjy amin’ny malala-tanàna ny ray aman-dreniny mba hanavotana azy amin’ny fitsaboana.
Zanak’olona antonontonom-pivelomana amin’ny fiainana i Diary. Zaza fahatelo ao amin’ny fianakaviana izy. Mpanamboatra trano ny asan’ny rainy, raha mikarakaraka tokantrano kosa ny reniny. Vao teraka kely i Diary no efa nanana olana ara-pahasalamana. Voalaza anefa fa tsy mba nisy tsy fahatomombanana izy, teo am-piterahana.
“Iray volana sy herinandro teo i Diary no nanomboka narary. Nanao vaksiny izy no natory foana, taorian’ izay. Ny alin’iny, tsy nety ninono. Hita hoe mitomany izy saingy tsy mahatafavoaka feo. Nanomboka teo ny kalvery ho anay mianakavy. Nentina tany amin’ny mpitsabo i Diary. Naiditra hopitaly teny Andohantapenaka, nandritra ny iray volana sy tapany. Vao esorina ny ôksizenina aminy dia malemilemy izy sady tsy mety mihinan-kanina”, hoy Rasoafenohanitra Lantonirina, reniny.
Efa nivoaka hopitaly ity zaza ity, taorian’izay. Tapa-bolana ihany anefa no afaka nipetraka tany an-tokantranon’ ny ray aman-dreniny izy. Tamin’ny 13 novambra 2019 no nanomboka niditra hopitaly teny Befelatanana ilay zazakely. Iray volana mahery aty aoriana, tsy misy fihatsarana ny toe-pahasalamany. Manaraka ny fitsaboana voalazan’ny mpitsabo ireo ray aman-dreniny. Vola an-tapitrisany no efa lanin’izy ireo tamin’ny fitsaboana.
“Io sempotra io no nahazo azy hatramin’izay. Nilaza ny mpitsabo nony, taty aoriana, hoe misy fiantraikany any amin’ny fony ilay izy. Marary ihany koa izany ny fon’ilay zaza. Vao andro vitsy lasa anefa izay, nisy dokotera
manam-pahaizana momba ny fo nilaza fa misy fiantraikany any amin’ny avokavoka ihany koa ity aretina mahazo an’i Diary ity”, hoy hatrany ny reniny mitantara.
Na eo aza ireo rehetra ireo, tsy mahakivy ny renin’i Diary izany. “Ny olanay izao dia ny lafiny fahafahana ara-bola amin’ny fanohizana ny fitsaboana. Tokony hatao “scanner” izy hahafantarana ny tena mahazo azy indray. Noesorina tsy nasiana ôksizena izy nandritra ny efatra andro izay. Malemilemy ilay zaza. Tsy matory, manomboka amin’ny 12 ora alina. Mitomany izy no sady tsy mety minono”, hoy Rasoafenohanitra Lantonirina.
Miasa tena, mpanamboatra trano, ny rain’i Diary. Sarotra anefa ny fitadiavana asa mandritra ny fotoam-pahavaratra toy izao, araka ny nolazain’ny vadiny. Mbola manan-joky miisa roa, 4 taona sy 16 taona, koa ito zazakely tsy salama ito. Nilaza ho efa nangataka fanampiana tamin’ireo fianakaviana ireo ray aman-drenin’ny zaza. Efa nanampy araka izay tratrany ireo
Tsy misy mangirana
Nanomboka tamin’ny 23 desambra 2019 no tsy fantatra marina intsony izay tena mahazo an’i Diary. “Tokony hanao “scanner” izy io saingy tsy vita ilay izy satria tsy misy vola hanaovana azy. Manodidina ny iray tapitrisa ariary ny saran’ny fanaovana ny fitarafana. Mety hanaraka fitsaboana hafa izy, aorian’ izay, rehefa fantatra ny
fototr’aretina”, hoy hatrany ny reniny.
Noho izao olana lalovan’ ity fianakaviana ity izao, dia manao antso izy ireo amin’izay malala-tanana rehetra afaka manampy. “Efa nanao izay azo natao izahay ray aman-dreny. Teo koa ireo fianakavianay nanampy izay vitany. Tsy mbola misy mangirana anefa, hatreto.
Mangataka izay afaka manampy izahay hanohizana ny fitsaboana. Hanova zavatra lehibe ny fahavitan’io “scanner” io. Tsy azo hodian-tsy hita ihany koa anefa fa tsy maintsy mbola hitohy ny fitsaboana, aorian’izay”, hoy ny reniny.
Ireto misy laharana finday hahazoana azy ireo 034 04 524 58/032 92 297 60/033 85 459 11, raha misy ireo tsara sitrapo amin’ny fanampiana an’i Diary eo amin’ny lafiny fitsaboana.
Baolina kitra – « Mondial 2022 » :: Tafara-bondrona amin’ny firenena telo antonontonony ny Barea
Vokatry ny oram-be :: Tafakatra roa amby telopolo ireo maty, an’hetsiny no tra-boina